प्रधानमन्त्री ज्यु ! के मेरो देश भारतिय सेना मार्फत भारतलाई बुझाईदैछ ? - USNEPALNEWS.COM
सम्माननिय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ज्यु ! अभिवादन छ । म के सुन्दैछु प्रधानमन्त्री ज्यु ? मेरो देसको राजधानी काठमाडौंमा एक भारतिय पेट्रोलपम्पको सुरक्षाका लागि भारतिय सेनालाई नेपालमा ल्याउने कुरा के सत्य हो ? यदि सत्य हो भनेदेखिन म यसको घोर बिरोध गर्दछु ।
प्रधानमन्त्री ज्यु म नेपाली हु एक वीर गोर्खालीको सन्तान हुँ । कसैले मेरो देसमा गिद्धे नजर लगाएको मलाई ठिक लाग्दैन । किन यस्तो हुदैछ आखिर मेरो देसमा प्रधानमन्त्री ज्यु? हुन त हजुरलाइ यो मेरो प्रश्न म प्रत्यक्ष रुपमा राख्ने हिम्मत भएको मान्छे हु म । जायज र सत्य कुरामा म कहिल्यै डराएर हिड्ने मान्छे होइन म प्रधानमन्त्री ज्यु । तपाईं हरुकै कारणले आज म जस्तै लाखौं युवाहरु ले यो पराइको देस सातसमुन्द्रपारी आएर रगत र पसिना बगाएर मेरो देसलाइ रेमिट्यान्स दिएका छौँ ।
हो त्यहीँ हामीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको पैसामा हजुरहरु के कहिलेसम्म गिद्दले सिनो लुछेको जस्तै गरेर मोजमस्ति गर्ने हो प्रधानमन्त्री ज्यु? अब त मलाई मेरो देसको आजभोली को हालत देखेर मात्रै रुन मन लाग्छ प्रधानमन्त्री ज्यु । हामी बिदेशीएका लाखौं युवाहरुले यहाँका देसमा कति बिकास निर्माणकार्य गरेका छौँ । यहाँका देसहरु कति बिकसित छन । दु:ख लाग्छ यहाँको बिकास भएको देखेर मेरो देसलाइ सम्झिन्छु । अनि कहिलेकाही त म नेपाली हु भनेर छाति खोलेर हिड्नु पनि मन मान्दैन प्रधानमन्त्री ज्यु ।
यो सबै तपाईं हरुको कारणले यस्तो भएको हो । म खुलेर भन्दछु मेरो देसमा कति सरकार आए तर खै देसले के पायो ? बरु मेरो देसले त भ्रष्टचारी, हत्यारा, बलात्कारी,गरिब मारा हरुलाइ मात्रै पाएको देख्छु । आजभोलि त मेरो देसमा कुनै पनि बिकास निर्माणका योजनाहरु को ठेक्का पट्टामा पहिले गुन्डाहरुलाई ढोगभेट गरेर दाम चढाउनुपर्छ । कठै मेरो देसको हालत देखेर कहिलेकाही त मलाई डाको छोडेर रुन मन लाग्छ प्रधानमन्त्री ज्यु! खैं मलाई त सङ्खैं लाग्दैछ यो देसमा अब प्रदेश र केन्द्र को निर्वाचन भएर देसले संविधान कार्यनयन गर्ला के भनेर? कति अर्ब खर्चभएको छ यो संविधान बनाउदा प्रधानमन्त्री ज्यु?
के यति गरेर ल्याएको संविधान तुहाएर छोड्ने हो कि? यसलाई कार्यन्वयन गरेर देसलाइ निकास दिने हो? केही समय अगाडि मेरो देसको राजधानी काठमाडौंमा एकदिन ठुलो वर्षा भएको थियो त्यो बर्षाको कारणले काठमाडौंको सामाखुशी चोकको सडकमा कहि कतैबाट केही नदेखिने गरेर पानी जमेको थियो। यसैक्रममा एउटि बालिका बिध्यालय बाट फर्किने क्रममा त्यहीँ पानी जमेको एक ह्युम पाएप मा छिरेकि थिइन धन्न भगवान कै कृपाले भनौ या उनका दिन बलियो रहेछ। उनलाई करिब २० मिटर तल बगेपछि एकजना पैदलयात्रु ले तत्कालै उद्दार गरेर बचाएका थिए । त्यहीँ दिन काठमाडौं कै एक अर्को ठाऊमा अर्कि बालिकालाई ढलको बाढीले बगाएर खोलामा पुर्‍याएको थियो तर उनलाई बचाउ कसैले पनि सकेनन कठै!
यी दुई घटनाल लगभग नेपाल भरि भाइरल भयो । अनि त प्रधानमन्त्री ज्यु ले काठमाडौं का सडकमा रहेका खाल्टाखुल्टि लाई १५ दिनभित्र पुर्ने आदेश पनि दिनुभयो । तर यो तपाईंको आदेसलाइ सडक बिभागले मानेको होला । त्यहीँ कारणले आजभोलि काठमाडौंको लाजिम्पाट सडक खन्डमा सडक पिच भएको २४ घन्टामा उक्त पिच गरिएको सडक लाई हातले उक्काउन मिल्दो रहेछ । कठै मेरो देसको सरकार मेरो देसको सडक बिभाग मलाई लज्जास्पद हुन्छ यस्ता कुरालाई सुनेर मात्रै पनि प्रधानमन्त्री ज्यु ।
हालै मात्रै तपाईंको सरकारले पुर्णता पाएको छ आश गरौँ तपाईंको सरकारले देसलाइ केही बिकास गर्ला कि भनेर!देसमा शान्ति शुब्यवस्था आउला कि? हामी परदेशीएका लाखौं युवाहरु ले देसमै बसेर केही रोजगारीका अवसरहरु पाउने छौँ कि? प्रधानमन्त्री ज्यु हजुर त चार चार पटक यो देसको प्रधानमन्त्री भएको ब्यक्ति हुनुहुन्छ कमसेकम यसपटक नेपाली जनताका मन मुटुमा बस्ने कोसिस त गर्नुस ।
राम्रो काम गरेर अन्त्यमा म पुन आग्रह गर्दछु प्रधानमन्त्री ज्यु के नेपाल को राजधानी काठमाडौंमा रहेको भारतिय पेट्रोलपम्म को सुरक्षाका लागि किन भारतिय सेनालाई ल्याउने कुरा छ के यो सत्य कुरा हो? भने मेरो फेरीपनि घोर बिरोध छ प्रधानमन्त्री ज्यु के यो देसमा नेपाली सेनाले केही गर्नसक्दैन र ? अन्त्यमा नेपाल आमाको जय होस् जय नेपाल ।
उहीँ देसभक्त नेपाल आमा को छोरा छत्र लकाइ खड्का
हाल मलेसिया बाट ।
टेनिसीमा नग्न बन्दूकधारीको आक्रमणबाट चारजनाको मृत्यु
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन रिट दायर गरिने